रेमिटयान्सले थामिएका मनको समृद्धि
मगलवार, असार १०, २०७६ ११:२३:११
रूपन्देहीको देवदहमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुन एक दिन अगाडि काठमाडौंबाट चितवनको नारायणगढ पुगेको थिएँ । भोलिपल्ट नारायणगढको सहिद चोकमा साथीहरू भेट्ने क्रममा एउटा साथी भेट्न गएको थिएँ । बिहानको खाना खाने समय भैसकेको रहेछ । साथी पसलबाट खान खान घरतर्फ लागिसकेको रहेछ । १५ देखि २० मिनेटमा आईपुग्छु भनेर हामीवीच मोबाइल फोन वार्ता भयो । सोही अनुसार सहिद चोकमा साथीको प्रतिक्षामा बसें ।
जहाँ साथीको प्रतिक्षार्थ म थिएँ, त्यहाँ एस.बि.आई. बैंकको ए.टी.एम.को काउण्टर पनि रहेछ । केहीबेर साथिको प्रतिक्षामा रहँदा त्यस काउण्टरमा पैसा झिक्ने र निकाल्ने क्रममा एकपछि अर्को हुँदै मानिसहरूको भिड बढ्ने क्रम बढ्यो । एकक्षण त ठूलै भिड पो हुन थाल्यो । क्रमशः लामबध्द भई शिष्ट तवरले आ–आफ्नो ए.टी.एम. कार्डबाट बैंकमा जम्मा गरिएको पैसा निकाल्दै बाहिरिंदै गए।
यसरी ए.टी.एम. काउण्टरसम्म आएर पैसा निकाल्ने र झिक्नेहरूमा अधिकांश महिला नेपाली दिदीबहिनीहरू मात्र थिए । तर, ती अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरूसंग दुधेबालकदेखि टुकुटुकु हिड्न सक्ने एक–एक बाल–बच्चा साथमा च्यापेर र बोकेर आएका थिए। एकछिन त खुशी नै लाग्यो ।
गाउँले परिवेशदेखि शहरीयासम्मका महिला दिदीबहिनीहरूले ए.टी.एम. कार्डको प्रयोगबाट सहजै रकम झिक्न सफल भएकोमा । तर ती महिलाहरूको अधिकांश पैसा विदेशबाट पठाईएको रहेछ । ती पैसा कसैका दाजु, कसैका भाइ त कसैका श्रीमानहरूले पठाएका रहेछन् । ती मध्ये अधिकांश श्रीमानहरूले पठाएका रहेछन् ।
त्यहाँ उपस्थित महिला दिदीबहिनीहरूले प्रायः एकअर्कामा चिनजान पनि रहेछ । मलाई सोच्न बाध्य बनायो ! सिङ्गै टोल वा गाउँ नै सल्लाह गरेर आएका पो हुन् कि ? म आफूलाई आफै प्रश्न गर्न थालें । उनीहरू आ–आफ्नै सुरमा एकआपसमा कुरा गर्दै थिए । तिम्रो अनि तपाईंको श्रीमानले यसपालि कति पठायो हँ ?
तिम्रो अनि तपाईको दाइ र भाइले कति पठायो नि ? यस्तै–यस्तै कुराकानी गरेको सुन्ने मौका पाइयो । पैसा पाउँदाको खुशी र हर्ष तथा आफन्त टाढा रहँदाकोे पीडा दुवै उनहिरूले सहजै अनुभूति गरेका होलान् ।
यसलाई तपाई हामी कुन अर्थमा बुझ्ने ? यसैबीचमा साथीसंग मोबाइल फोनमा कुरा भयो र साथी आउन ढिला हुने जानकारी दियो । साथै हतार नगरी कार्य सम्पादन गरेर मात्र आउन अनुरोध गरें । भोलि बिहानको कार्यक्रम छ, बुटवलतर्फ लम्कन्छु भन्दै सम्वादलाई छोट्याएं र बुटवलको गाडी उपलब्ध हुने बसपार्कतर्फ लम्कें।
बाटोमा हिड्दा हिडेदै काठमाडौंबाट मोवाइलमा घण्टी बज्यो । मोबाइल फोन उठाएं । उताबाट “सर, नमस्कार“
सम्वादमा “नमस्कार“ !
“कता हुनुहुन्छ“ ?
“को बोल्नु भएको“ ?
“ए म, गंगालालबाट“
“ए,भन्नु न अहिले म चितवनको नारायणगढमा छुु“
“सर,एउटा बी नेगेटिभको फ्रेश रगत चाहियो“
“कति समयभित्र वा कहिलेलाई“ ? अहिले बुटवलतिर जाँदैछु“ । यो बुटवल शब्द सुन्दासाथ एउटा गाडीको कण्डक्टरले भन्यो “दाइ यही हो बुटवल जाने गाडी“ भन्दै ईशारा गर्दै गाडी चढ्न अनुरोध गर्याे । उक्त गाडी भित्र चढें । कण्डक्टरले ढोकाछेउको सिटमा बस्न अनुरोध गरगर्याे र बसें ।
मोबाइलमा कुरा हुँदै थियो । एउटा स्वयंसेवी रक्तदातालाई फेन गरें र गंगालाल अस्पतालमा पुगि रक्तदानको लागि अनुरोध गरें । उक्त स्वयंसेवी रक्तदाताको नम्बर सम्बन्धित पीडितपक्षलाई एस.एम.एस. गरिदिएं । केहीबेरमै यात्रुहररू बस भित्र चढ्ने क्रममा एउटी बुढीआमै जो मसंगैको सिटमा बस्न आईन् । साथै उनीसंग उनकी बुहारी र नातिनी पनि थिइन् । बुहारी बस चालकसंगै ईन्जिन माथि बसिन् र बच्चिलाई उनकी हजुर आमाले काखमा लिईन् । अरूपनि दुई चार जना महिलाहरू बसभित्र आफ्ना लालाबाला नानीहरूकासाथ यात्राको लागि चढिन्।
मसंगै बसेकी बुढीआमालाई ती महिलाहरूले चिनेकी रहेछिन् र उनीहरू एकआपसमा कुराकानी गर्न थालिन् । “आमा कहाँ पुगेर आउनु भएको“ ? बुढीआमा “छोराले पैसा रकम पठाएको रहेछ, पैसा रकम लिएर आएको“ । ऋणले भुसुक्कै मारि सक्यो “ ।
“हो भने“–बुढीआमैले थपिन् । मैले आफ्नो दृष्टि बसको झ्यालबाट बाहिरतर्फ राख्दै आएँ । तर कानको श्रवण शक्तिलाई तिनीहरूको सम्वादमा केन्द्रीत राखें ।
यसरी एकपछि अर्को, अर्को पछि झन् अर्को हुँदै सबैको एउटै कथा–ब्यथा सुन्दै आएँ । यात्राभर लालाबाला बच्चाहरूकासाथ महिला दिदीबहिनीहरूको अवस्थाले सिङ्गो देशकोलाई चित्रण गर्न सकिन्छ । दिनहुँजसो हजार बाह्रसयको औसत संख्यामा देशका यूवा शक्ति बिदेश जाने र पलायन समेत हुन बाध्य बनाएको छ ।
आजको लाचार सरकारले यिनैको रेमिट्यान्सले र देशबासिको करले आफ्नो जिबिकोपार्जन पूर्णतः बिलासिमय बनाएको छ र आफूलाई परनिर्भर बनाई दिएको छ । आत्मनिर्भरताको कुनै पनि सुत्राधार गर्न खोजेको छैन । फलस्वरूप आफ्नै नेतृत्वबाट दासताको जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
मेरो यो नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको यात्रामा देखिएका र सुनेका केही झलक र संवादका मात्र हुन् । यीनै आंशिक झलक र संवादले आमा बुवा , श्रीमान् श्रीमती , दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले कस्तो कस्तो नियतिहरू भोग्दै जीवन ब्यतित गर्दै रहेका छन् त ! यो नै यात्राको उपलब्धिको रूपमा लिएको छु ।
यस्तो परिस्थितिलाई निम्त्याउने कारण पत्ता लगउने र विदेशमा गई रगत पसिना बगाउन बाध्य बनाउने निति कसले ल्याएको हो ? त्यसको घोर बिरोध गर्दै स्वदेशमै रोजगारिका लागि सरकारद्वारा आवश्यक कदम चालि देशलाई समृध्द बनाउने सोँच तर्फ अग्रसर हुन जरुरी भईसक्यो ।
अब जनताबाट धेरै कुराहरू सरकारले सिक्नु पर्ने समय आएको छ । जनताको घरदैलोमा चुनावका बेलामा मात्र होईन, चुनाव पछिको समय जनताले मुल्यांकन गर्ने समय हो । तसर्थ देशभरबाट भोग्दै गरेको वैदेशिक रोजगारको आत्मकथालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो आँट गर्न सक्नु पर्दछ, साँच्चै नै जनताको सरकार हो भने । जनता हिजो भन्दा आज , आजभन्दा भोलि गरिबीको रेखामुनि तिब्रगतिमा ढकेली रहेको बर्तमान अवस्था छ ।
कहाँ छन् नि छोरा“ ?
“मेरो पनि यसको बाबा कतार गएको अहिलेसम्म पैसा पठाएको छैन“ ।
बुढीआमा –“कति भयो नि गएको“ ?
“एक बर्ष पूरा भयो“ ।
बुढीआमा – “मेरो त यो ठूलेले पठाएको पैसा लिएर आएको । अर्काे कान्छोले त पठाउनै सकेको छैन् । काम गरेर “धौ“ भएको छ भन्छ के हो के हो“ ?
उनीहरू बीच भएको कुराकानीमा मैले जो सुने त्यही लेखेको छुँ । थाहा छैन के हो “धौ“ भन्ने शब्दको अर्थ ? तिनीहरूको कुराकानीको सिलसिलामा अर्की एक आईमाईले पनि कुरा थपिन् । “नपठाउनु बिदेश, पठाईयो , के के नै होला भनी । अहिले साथमा मान्छे पनि छैन् । पैसा पनि भनेजति ऋण माथि ऋण थुप्रिनेक्रम बढ्दो छ ।
युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सकेमा हामी स्वाधिन नेपालका स्वाभिमानी नेपाली भनी बिश्वभर चिनाउने र परिचय दिन सकिने छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ठडिएझैं नेपाल र नेपालीको शिर पनि गर्वले संसारभर उँचो रहने छ ।
अन्तमा, योजना र दूरगामी सोँच विनाको नेतृत्वले कदापि सहि मार्ग र गन्तब्य पहिल्याउन सक्ने छैन । तसर्थ सत् वाणी, सत् कर्मले मात्र सत् मार्ग प्रसस्त गर्न सक्दछ र गन्तव्य सहजै हाँसिल गर्नसक्छौं ।
-साभार नामी साप्ताहिक
प्रकाशित मिति: शनिवार, आश्विन ६, २०७५, ०९:०९:००